Nofoanana ny fiadiana ny amboara eran-tany 2021
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana ara-panatanjahantena » Nofoanana ny fiadiana ny amboara eran-tany 2021
Ny fiadiana ny amboara eran-tany FINA Diving 2021 dia natao ho fifaninanana mendrika amin'ny Lalao Olaimpika Tokyo
Noterena hanafoana ny fifaninanana ara-panatanjahantena marobe i Japon ho fepetra fiarovana
Hatramin'ny androany dia laharana faha-39 i Japon manerantany amin'ny tranga COVID-19 voalaza
Nilaza ny FINA fa hitady toerana hafa avy hatrany ny federasiona ho solony
Nofoanana ny fiadiana ny amboara Tompondaka eran-tany 2021 izay nokasaina hatao tao Tokyo teo anelanelan'ny 18 sy 23 aprily.
The 2021 Fiadiana ny amboara eran-dranomasina FINA dia tokony ho fifaninanana mendrika amin'ny Lalao Olaimpika any Japon amin'ity fahavaratra ity, saingy ny Federasiona lomano iraisam-pirenena nampandre ny mpandray anjara omaly fa nofoanana ny hetsika.
Ity taratasy avy amin'ny FINA ity dia nilaza fa hitady toerana hafa avy hatrany ny federasiona ho solony, saingy miharihary fa tara io.
Ny Lalao Olaimpika fahavaratra 2020 any Tokyo any Tokyo dia hatao amin'ity taona ity eo anelanelan'ny 23 Jolay sy 8 Aogositra. Tamin'ny martsa 2020, ny Komity Olaimpika Iraisam-pirenena (IOC) dia nanambara ny fanapahan-kevitra hanemotra mandritra ny herintaona ny Lalao Olaimpika sy Paralaimpika fahavaratra 2020 any Japan noho ny COVID-19 niely.
Raha jerena ny fielezan'ny virus coronavirus dia voatery nanafoana ny fifaninanana ara-panatanjahantena maro i Japon ho fepetra fiarovana.
Roa herinandro lasa izay, ny komity mpikarakara eo an-toerana ny Lalao Olaimpika 2020 tany Japon dia nanambara ny fanapaha-keviny handrarana ny mpijery vahiny rehetra tsy ho tonga any Japon hanatrika ireo fifaninanana quadrennaly andrasan'ny maro indrindra ho fepetra fiarovana amin'ny fanaparitahana ny virus coronavirus manerantany. Ny minisitry ny Lalao Olaimpika Japoney Tamayo Marukawa dia nilaza tamin'ny mpanao gazety tamin'izany fotoana izany: "Ny fanapahan-kevitra dia avy amin'ny filàna antoka hiantoka ny filaminana eo afovoan'ny valanaretina."
Hatramin'ny androany, laharana faha-39 eran'izao tontolo izao i Japana raha ny tranga voamarina fa tranga COVID-19, izay mahatratra 474,773 ankehitriny. Maherin'ny 9,160 ny olona maty noho ny aretina coronavirus vaovao tao amin'ny firenena, raha maherin'ny 446,410 no sitrana tamin'ny aretina.
Nahazo ny tifitra vaksiny COVID-19 voalohany i Sultan of Brunei
Lozam-pifamoivoizana nahafaty olona indrindra tany Taiwan